2019 #NABShow: အီလက်ထရောနစ်အားကစားတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ Continues! NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - - အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်းများ
Home » အသားပေး » 2019 #NABShow: အီလက်ထရောနစ်အားကစားတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ Continues!
2019 #NABShow: အီလက်ထရောနစ်အားကစားတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ Continues!
အဆိုပါအီလက်ထရောနစ်အားကစားအတွေ့အကြုံကိုငွေရှာခြင်းအတွက်မဟာဗျူဟာများအတွက်နက်ရှိုင်းသောရေငုပ်တစ်စင်းအားကမ္ဘာအနှံ့ကြီးထွားလာသောဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ 2019 များအတွက်ကြည့်ရှုမှုများ၏ခန့်မှန်းတိုးတက်မှုနှုန်း 427 သန်းရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်ရသည်။ အစီရင်ခံစာများဧပြီလ 2017 ထဲမှာ, ဂိမ်းစျေးကွက်၏ 42% မိုဘိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်နှင့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်း 50 အားဖြင့်ထက်ပိုမို 2020% စျေးကွက်တောင်းဆိုဖို့စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်ပါပြီ။
အဆိုပါ 2019 #NABShow ယင်းအီလက်ထရောနစ်အားကစားအတွေ့အကြုံ featuring ပါလိမ့်မည်။ တက်ရောက်လာသည့်worldâ€™ s ကိုကြီးထွားလာဂိမ်းလူမြိုးတစျမြိုး checkout မှာနောက်ဆုံးပေါ်အကြောင်းအရာပေးပို့နည်းပညာများသို့အသာပုတ်နိုင်သည် NAB ပြရန်ယနေ့အထိ€™်အကြီးမားဆုံးအီလက်ထရောနစ်အားကစားနှင့်ဂိမ်းတဲa။ (ထိုများစွာသောအချို့ကို) အစည်းအဝေးများမီးမောင်းထိုးပြအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောများမှာထောက်ပံ့:
ဘယ်လို 5G နှင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစားအကြီးအကျယ် Service Providers များအတွက်ပြဇာတ်ဖျော်ဖြေမှုကိုပြောင်းပါလိမ့်မယ်: တွင်ဂိမ်း။ တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 8 | 10: 30 နံနက် - 11: 00 နံနက် | N419 ။ အနှစ်ချုပ်: on-the-go မြင့်သောသစ္စာ AAA ဂိမ်းကစား, မိုဘိုင်း၏လွှာမှကန့်သတ်4Gâ€™်အောင်းနေချိန်နှင့်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။ သို့သော် 5G ကစားသမားများနှင့်ကြည့်ရှုသူများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ဝန်ဆောင်မှုခရီး reimagine ဖို့အခွင့်အလမ်းဖန်တီးသည်မိုဃ်းတိမ်ဂိမ်းကစားခြင်း၏လက်ရှိနာကျင်မှုအချက်များကိုဖယ်ရှားပစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ panel ကို 5G သစ်ကိုအပြန်အလှန်မော်ဒယ်များစားသုံးမှုကို formats နှင့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားများကိုဖွင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစားအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုစူးစမ်း။ ဒါဟာထုတ်လွှင့်, content တွေကိုထုတ်လုပ်သူများ, နှင့်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရဝန်ဆောင်မှုပေးများအတွက်အခွင့်အလမ်းကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
အီလက်ထရောနစ်အားကစားအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေဘယ်လိုအမှတ်တံဆိပ်ဟာ Next ကိုအဆင့်ရန်ဂိမ်းကိုယူနိုင်သလား။ တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 8 | 2: 00 ညနေ - 2: 30 ညနေ | N419 ။ အနှစ်ချုပ်: အီလက်ထရောနစ်အားကစားမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေး၏အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာ segments များထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်, အနှစ်တစ်ထောင်အကြား၎င်း၏လူကြိုက်များနှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Z ကိုငြင်းသည်။ အီလက်ထရောနစ်အားကစားအရှိဆုံးအဘယ်ကြောင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအမှတ်တံဆိပ်ပင်ပိုကြီးပြီးပိုထိရောက်နည်းလမ်းပါဝင်ပတ်သက်ရဖို့ရှာကြသည်သောအသက်အပိုင်းအခြား, ဆည်းကပ်၏တဦးတည်းမှစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အယူခံအမျိုးမျိုးကိုထိ။
အဆိုပါဂိမ်းများခင်မှာ Begin: နောက်ကွယ်မှာ-The-screen တစ်ဦးကအဆောက်အဦး Amazing အီလက်ထရောနစ်အားကစား Infastructure မှာကြည့်ပါ။ အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ9| 1: 00 ညနေ - 1: 30 ညနေ | N419။ အနှစ်ချုပ်: ထုတ်လွှင့်နည်းပညာဖြစ်ရပ်များ esporting အတှကျအသုံးပွုနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်ကိရိယာများထုတ်လုပ်သူအီလက်ထရောနစ်အားကစားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်သူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုတိုးမြှင့်နေကြသည်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တွေ့စကားကိုနားထောငျနိုငျသညျဘယ်လိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရရှိ။ လတ်တလောတပ်ဆင်အချို့သို့နက်ရှိုင်းစွာငုပ်ယူပါနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခန်းတစ်ခန်းနှင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်ဆင့်မှအီလက်ထရောနစ်အားကစားစစ်ဆင်ရေးရွှေ့ကြောင်း In-နေရာထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အဆိုပါဂိမ်းထဲမှာ Get: နယူး Tech မှကြည့်ရှုသူများသည်ထိန်းချုပ်အီလက်ထရောနစ်အားကစားကိုပေးသနားဘယ်လို။ အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ9| 4: 00 ညနေ - 4: 30 ညနေ | N419 ။ အနှစ်ချုပ်: အီလက်ထရောနစ်အားကစား multi-ဒေါ်လာဘီလီယံစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး, ကြည့်ရှုမှု, သိသိသာသာတိုးတက်hasnâ€™ t ကိုစောင့်ကြည့်၏အတွေ့အကြုံတိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်နေစဉ်။ ပရိသတ်တွေအေဂျင်စီနှင့်သူတို့အတွေ့အကြုံကပိုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အောင်, ကြည့်ရှုနေကြတယ်ဆိုတာကိုထိန်းချုပ်ချင်တယ်။ နယူးနည်းပညာများနောက်ဆုံးတော့စစ်မှန်တဲ့ကာလ၌ဖြစ်ပျက်မှရုပ်ရှင်တင်ဆက်မှုဆောင်ခဲ့ပရိသတ်ကို၏လက်သို့ကြည့်ရှုအတွေ့အကြုံ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုချပြီး, ဒီတတ်နိုင်သမျှလုပ်နေပါတယ်။
level-Up ကိုဘယ်လိုဗီဒီယိုဂိမ်းကို TV ၏အနာဂတ်မောင်းနှင်နေသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 10 | 10: 30 နံနက် - 11: 00 နံနက် | N419 ။ 300MM ကျော်ကလူကိုမှန်မှန်အွန်လိုင်းဂိမ်းကိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာစောင့်ကြည့်မှုနှင့်အတူ, ဒီမဟုတ်တော့တဲ့နယ်ပယ်ပရိသတ်ကိုပေမယ့်လာရန်အမှုအရာများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းကစားသူပရိသတ်များအတွက်သမိုင်းကြောင်းအသစ်ကစားသုံးသူအပြုအမူတွေနဲ့ဦးစားပေးခန့်မှန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကျောက်မီးသွေးmineâ€အတွက်â€œcanaryခဲ့ကြပြီ။ အဘယ်အရာကိုဂိမ်းကစားယနေ့ပြုပါခေတ်ရေစီးကြောင်းမနက်ဖြန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ပြန်လည်စဉ်းစားအားကစားစပွန်ဆာပေးခြင်းမြား: A ဂိမ်းသန်းကပို။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 10 | 4: 00 ညနေ - 4: 30 ညနေ | N419 ။ အနှစ်ချုပ်: အဆိုပါအားကစားစက်မှုလုပ်ငန်း, ITA €™ s ကိုအီလက်ထရောနစ်အားကစားသို့မဟုတ်ရိုးရာအားကစားရှိမရှိ, အားကစားစပွန်ဆာစာချုပ်များများအတွက်အောင်မြင်မှု၏တစ်ဦးတည်းသောအတိုင်းအတာမြင့်မားဒေါ်လာစျေးငွေပမာဏကြောင်းအသက်အရွယ်အရွယ်အတွေးအခေါ်နှင့်အတူနှောငျ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဖက်ချဉ်းကပ်၏ထိုလမ်းtodayâ€™ s ကိုအားကစားနယ်ပယ်များတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်€™ t ကို ISNA ။ အစဉ်အဆက်ထက် Now ကိုပိုပရိတ်သတ်တွေအားကစားနှင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစားအဖွဲ့များ၏မိတ်ဖက်များအတွက်, စဉ်းစားဟန် complimentary နှင့်သက်ဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုတောင်းဆိုနှင့်teamâ€™ s ကိုပူဇျောသက်ကာသိသာထင်ရှားသောတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်အတူတက်တွဲမှလက်ျာဘက်အမည်များကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
အားကစားပြိုင်ပွဲမှတဆင့်ဇာတ်လမ်းတွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရှင်များနှင့် Developers Entertainment က IP ကိုများအတွက် Co-Create New ကိုဇာတ်လမ်းများ။ ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 11 | 10: 30 နံနက် - 11: 00 နံနက် | N419 ။ အနှစ်ချုပ်: ဟောလိဝုဒ် ဂိမ်းတွေကကကဂိမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးရုပ်ရှင်များ, သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်အပေါ်အခြေခံပြီးဂိမ်းများကိုဖြစ်စေ, တစ်ဦးထပ်ပွဲနှင့်အခန်းအနားသမိုင်းခဲ့ကြပြီး, ဖျော်ဖြေရေးဤပုံစံများ 40 နှစ်နီးစပ်ဘို့န်းကျင်ခဲ့ကြပြီ။ ဒါပေမယ့်သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးပရိသတ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်းအတွေ့အကြုံများအချို့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတနေစဉ်အတွင်းတစ် Co-ဖန်ဆင်းခြင်းချဉ်းကပ်နည်းယူသောသူတို့ခဲ့ကြပြီ။
2019 #NABShow: ကုန်ပစ္စည်း Spotlight ကို: Blackmagic ဒီဇိုင်းအားဖြင့် HyperDeck လွန်ကဲ 8K HDR - ဧပြီလ 8, 2019
2019 #NABShow: $ 1 ဘီလီယံနှင့်မဲရေတွက်, SPROCKIT startup ၏နောက်ဆုံးက Round ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်! - ဧပြီလ 3, 2019
2019 #NABShow Adobe ကကြီးမားသော Creative Cloud ဖြန့်ချိကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်! - ဧပြီလ 3, 2019
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား	2019-03-01
ယခင်: ဝိပဿနာတီဗီချိန်းဆိုမှု, Mark Romano VP, အမေရိကတိုက်